बालेन र मुकुन्दको ‘केमेस्ट्री'मा नयाँ ट्वीस्ट, सबै छक्क ! - Lekh-Patra
बालेन र मुकुन्दको ‘केमेस्ट्री’मा नयाँ ट्वीस्ट, सबै छक्क !
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि बसेको पहिलो बैठक सहज रुपमा अघि बढेन। जेठ १६ गते नगरकार्यपालिकाको पहिलो बैठकमै महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)लाई रोक्दै वडा अध्यक्षहरुले बैठकको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
विभिन्न ६ वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको पहिलो बैठकमा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले निर्णय नै भइसकेको भने पछि सबैभन्दा चर्कोगरी विरोध गर्ने वडाअध्यहरुमध्यमा पहिलो नम्बरमा थिए वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रिजाल दोस्रो पटक पनि निर्वाचित भएर महानगरको कार्यपालिकामा छन्। प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको उक्त बैठकमा बालेनको निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठाएपछि सामाजिक संजाालमा रिजालको चर्को आलोचना पनि भएको थियो।
उता, बालेन साहप्रति भने काम गर्न खोजेको तर गर्न नदिएको भन्दै संजाल समर्थनमा थियो। पहिलो बैठकमा साहलाई अघि बढ्न सकस पारेका रिजाल दुई हप्तापछि भने बदलिएका छन्। यति सम्मकी रिजाल ठिक उल्टो बालेनकै बचाउमा देखिए आइतवारको दोस्रो कार्यपालिपकाको बैठकमा।
वडा अध्यक्षहरुको आलोचना र मेयर साहको बचाउमा उत्रिन मेयर साह र रिजालबिचको शनिवारको लन्च मिटिङले भने कतिको काम गर्‍यो?साहको आलोचना गरेपछि सामाजिक संजालमा ट्रोलको सिकार बनेका रिजालले अबका दिनमा आफ्नो सम्बन्ध साहसँग कस्तो बनाउँलान? चासो बढ्न थालेको छ।
रिजालले पहिलो बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई समेत चेतावनी दिएका थिए।
उनले कर्मचारी भएर धेरै बाठो नहुन भन्दै पौडेललाई सचेत गराए। तर,दुई हप्तापछिको कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमा रिजाल ‘कुल’देखिएका छन्।